Marbled yogurt keke, yechinyakare | Kicheni Mapepa
Marbled yogurt keke, nyore mangwanani
El Keke yeyogati Iyo yakasarudzika yekutangira nayo munyika yepastry. Kurumidza uye nyore kugadzirira, haitombokundikana uye chikafu chakanakisa chemangwanani chemhuri yese. Isu tinowana sei marbled mhedzisiro?
El marbled mhedzisiro Izvo zvinowanikwa nekuwedzera cocoa poda kune chikamu chedu mukanyiwa uye kutamba nematanho. Vanoda chokoreti vachada kuwedzerwa uku uye keke richava rakanyanya kupenya. Zvizame!
1 ndimu yogati
2 zviyero zveshuga yogati
1 chiyero chemafuta yogati
3 zviyero zveiyo yogati yogati
1 envelopu yeRoyal mhando mbiriso
2-3 tablespoons cocoa poda
Isu tinopisa huni kusvika 180º.
Mundiro yatinorova tichibatsirwa nevamwe tsvimbo dzemagetsi mazai neshuga kusvika zvasangana zvakanaka. Tevere, tinowedzera izvo zvinosara zveimwe zvinoshandiswa chimwe nechimwe uye nekurova kusvikira zvabatanidzwa mumusanganiswa.
Isu tinopatsanura 1/3 yemusanganiswa mune imwe mbiya uye wedzera 2-3 mashupuni ecocoa upfu. Sanganisa zvakanaka nechipunu kuti ubatanidze cocoa uye uwane huwandu hwakaenzana.
Isu tinotanga nekudurura chikamu che "chena" mukanyiwa mukati medu silicone muforoma kusvikira pasi ravharwa. Tevere, tinodurura chikamu checocoa mass pamusoro, sekunge tiri kutsvaga nzira diki pamusoro peiyo yapfuura massa. Tinodzokorora iyi nhanho yekupedzisira kusiana kwevanhu kusvikira vapera simba.
Kuti uwane iyo marbled mhedzisiro, Isu tinoshandisa skewer skewer kutsvaga "masere" pane yedu bundu.
Isu tinobikira 35-40 minutos. Isu tinoongorora kana keke rakagadzirwa nekupinza zino kana kumucheto kwebanga. Kana ikabuda yakachena, ichave nguva yekuibvisa muchoto.
Isu tinoirega ichipisa uye isingaumbike pane rack kuti ipedze kutonhora.
Mamwe mashoko - Lemon chipanje keke, iri nyore mangwanani
Nguva yekugadzirira 10 maminitsi
Nguva yekubika 35 maminitsi
Yese nguva 45 maminitsi
Kilocalories pakushanda 220
Kubika chave chimwe chezvinhu zvandaifarira kubvira ndichiri mudiki uye ndaishumira sedhongi raamai vangu. Kunyangwe iine zvishoma zvine chekuita nebasa rangu razvino, kubika ... Wona chimiro>
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Desserts » Marbled yogurt keke, nyore mangwanani
Spaghetti ine meatballs, kushandisa yasara spaghetti
Puff pastry yakazadzwa nechokoreti uye bhanana cream